> Resource> Music> Nyefee Music si iPad ka iPad na ala
Jikotara multiple ezi-sounding songs on enyi gị iPad na nke gị, otú i abụọ chọrọ nyefee music si iPad ka iPad maka ekere òkè na onye ọ bụla ọzọ? Enwetatụbeghị a jụụ ọhụrụ iPad, iPad Obere ihe atụ, ma ugbu a, na-ekpebi nyefee niile music si ochie iPad ndị ọhụrụ otu? Ihe ọ bụla ị na-ezute, ihe ị ga-eme?
Nọmalị ọ bụ ihe siri ike idetuo music si iPad ka iPad gwụla ma ị nwere a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ. Ebe a, m ike ikwu na ị na-eji a dị ike iPad ka iPad transfer - Wondershare TunesGo. Nke a na usoro bụghị nanị ike gị idetuo music na Fim, skips na ndị ọzọ site na otu iPad ọzọ, kamakwa ịkpali listi ọkpụkpọ, videos, kọntaktị n'etiti abụọ iPads. E wezụga iPads, a usoro akwado ebufe data n'etiti iPhone, iPod, PC na iTunes dị ka mma.
Bugharịa music si iPad ka iPad na ala
Download a iPad ka iPad transfer na kọmputa gị. Wee soro nduzi n'okpuru nyefee iPad music ka iPad.
Nzọụkwụ 1. Launch a iPad ka iPad transfer
Ná mmalite, wụnye na ẹkedori a iPad ka iPad transfer na kọmputa gị mgbe ị download ya. Mgbe ahụ i kwesịrị jikọọ gị abụọ iPad ụdị site na eriri cables. Nke a na usoro ga-adịghị anya ịchọpụta gị na ngwaọrụ. Mgbe ahụ faịlụ niile na iPad ụdị a ga-emere na ekpe ndekọ osisi nke isi interface.
Cheta na: Biko ibudata ma wụnye iTunes na kọmputa gị tupu-eme music ebufe n'etiti iPads.
Nzọụkwụ 2. Nyefee songs si iPad ka iPad
Na ekpe ndekọ osisi, pịa triangle nke iPad taabụ na ị na-ekpebi mbupụ music. Dị ka ị na-ahụ, faịlụ niile na nke a iPad ga-egosipụta. Wee pịa "Media". Wee pịa "Music" mgbe media windo na-egosi na nri ebi ndụ.
Na music window, chọta music faịlụ i bu n'obi nyefee ọzọ iPad. Pịa "Export ka". Mgbe ndọpụta ndepụta na-egosi, ị ga-ahọrọ "Export gị iPad". Mgbe ahụ, a omume amalite na-eme music ebufe. Nọgidenụ na-abụọ iPad ụdị ejikọrọ na kọmputa gị tupu music ebufe nsọtụ.
Cheta na: Wondershare TunesGo akwado iPad ikuku, iPad Obere na Retina ngosi, iPad Obere, iPad na Retina ngosi, The New iPad, iPad 2 na iPad. Ọ bụ dakọtara na iOS 9/8/7/6/5.
Ụda oké? Ọma, dị nnọọ ibudata a omume na-agbalị ya ugbu a!